Kofi ANANN abanyela n'akụkọ ihe mere eme dị ka ezigbo mmadụ - Afrikhepri Fondation
Satọde, Mee 8, 2021
Welcome Egwuregwu ndị enyi ojii
Kofi ANANN abanyela n'akụkọ ihe mere eme dị ka ezigbo mmadụ
Lọ na-asọpụrụ ikike mmadụ, ikike nha anya n'etiti nwoke na nwanyị, ịlụ ọgụ megide ọrịa AIDS bụ omume niile nke Kofi ANANN, onye bụbu ode akwụkwọ ukwu nke United Nations n'ime afọ itoolu ya n'isi nzukọ. Omume ndị a na-eduga Director General nke Officelọ Ọrụ United Nations na Geneva, Micheal MOLLER, ịzaghachi ya mgbe ihe karịrị afọ iri anọ nke njikọta na usoro ya:
"Kofi ANANN abanyela n'akụkọ ihe mere eme dị ka ezigbo mmadụ".
Akụkọ banyere ọnwụ ya nke ndị ikwu ya si Switzerland zitere na Satọdee nke iri na asatọ nke Ọgọstụ puku abụọ na iri na asatọ bụ ebe kadịrị etiti ujo nke mmetụta ya zuru ụwa ọnụ.
Mmiri ozuzo nke ụtụ nye onye isi odeakwụkwọ nke United Nations na ezinụlọ ya anaghị agwụ site na ndị isi obodo, ndị nnọchi anya mba. Kofi ANANN, amụrụ XNUMX Eprel, narị iteghete na iri atọ na asatọ, mere ọkwa a site na Jenụwarị XNUMX, narị iteghete na iri iteghete na asaa rue Disemba iri atọ na otu, puku abụọ na isii, ụwa na-eche nkwukọrịta nke kalenda olili ya iji mee ụtụ ikpeazụ.
Ruo mgbe ọ nwụrụ n'oge na-adịbeghị anya, ọ rụrụ ọrụ dị ka UN-League of Arab States Joint Special Envoy maka Syria Crisis. Kofi ANANN nwere ezigbo ọrụ. Ọ malitere ọrụ ya na United Nations dịka onye nlekọta na mmefu ego nke Healthtù Ahụ Ike Worldwa na Geneva na narị afọ itoolu na iri isii na abụọ, mgbe ahụ onye isi odeakwụkwọ na-esote ya na onye na-esote Secretary General maka ịkwado udo. Ihe karịrị iri afọ abụọ gachara kpọmkwem site na otu puku, narị iteghete na iri iteghete na abụọ na otu puku iteghete na iri itoolu na isii.
"ANY THE NA-EKWU" ọrụ nke United Nations na narị afọ nke XNUMX
Otu n'ime ihe nrite kasịnụ nke Kofi ANANN onye bụbu Secretary General nke United Nations bụ mbipụta akụkọ ahụ " ANYỊ, ndị mmadụ Ọrụ nke United Nations na narị afọ nke 21 na afọ mils abụọ.
Aha nke akụkọ ahụ "ANY P NA-EGO" Ọrụ nke United Nations na 21st narị afọ sitere n'ike mmụọ nsọ Charters, akwụkwọ ọmụmụ ọmụmụ nke United Nations nke na-ekwuchitere ndị mmadụ site n'ikwu "Anyị, ndị mmadụ…" na " dozie esemokwu site na udo, nweta mmekọrịta mba ụwa iji dozie nsogbu akụ na ụba, nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke ọgụgụ isi ma ọ bụ nke ọdịmma mmadụ… ”iji kwalite mmekọrịta na mgbanwe n'etiti mba ụwa.
“ANY P NA-EBU ND P” Ọrụ nke United Nations na narị afọ nke 1 na-ekewa n'ime isi asaa, ụfọdụ n'ime ha ka edepụtara n'okpuru: 2 Afọ ọhụrụ, nsogbu ndị ọhụrụ; 3 Ijikọ ụwa ọnụ na ọchịchị ya; 4 Nọrọ n’enweghị ihe ga-eme ka ị ghara ịdị ndụ; XNUMX Uwa nke egwu n’adighi na ya na nari ato na iteghete nke meturu isi okwu nile di nkpa ma juo aro iji nweta nmeko nzi etiti netiti mba uwa.
Millennium Sustainable Development Goals (MDGs) nke dochiri Millennium Development Goals (MDGs), ihe ndi a sitere na akuko a "Anyị ndị mmadụ »Ọrụ nke United Nations na 21st narị afọ.
Kofi Annan: Nwoke nke Udo na World War (Akwukwo nke Bekee)
Zụta € 11,63
Oge emelitere ikpeazụ na Mee 8, 2021 3:25
pịa ka gụkwuo ...
Atiya Egwuregwu ndị enyi ojii
Peeji nke nwere ike ịmasị gị
Mark Dean, onye ojii ojii America nke IBM PC
Coca-Cola na Pepsi ga-eji ọgwụ keminogenic
Ee ee ọganihu - Louise Hay (Audio)
Anyị na-ezochi eziokwu banyere ọgwụ ndị na-egbochi ọrịa ọgwụ site na 1975
Banye ịkọrọ otu edemede